‘भेजिनल स्वाब’ नै नपठाएको अवस्थामा केको डीएनए परीक्षण ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
‘भेजिनल स्वाब’ नै नपठाएको अवस्थामा केको डीएनए परीक्षण ?
प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन १५
काठमाडौं । कञ्चनपुरका तात्कालीन डीएसस्पी डिल्लिराज विष्टसिहित उनका छोरा र मेयरका भतिजाको डीएन्ए टेस्ट नमिलेको वा निगेटिभ भएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको ‘भेजिनल स्वाव’ नै नपठाएको अवस्थामा डीएन्ए परीक्षणको कुरा नाटक मात्र थियो र हो पनि
लत्ता कपडा धोइधाई पार्ने, कागजको चिर्कटोसम्म जलाउने, हतारमा लाश जलाउने गरेका प्रहरीले निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’ पठाएको भन्ने कुरा त बाघले मृग बोकेर जीउँदै काठमाडौं ल्याएको भने जस्तै हो । अर्को कुरा डीएन्ए टेस्ट प्रहरी अस्पतालमा गरिएको भनिएको छ ।
पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याको थप छानबिनका लागि निकै जनदबाब परेपछि बाध्य भएर गृहमन्त्रीको आदेशमा गृहका सह–सचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि गृहमन्त्री थापाले एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र भिमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको डिएनए परिक्षण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीको आदेशअनुसार आशंकित तिनै जनाको रगत नमूना संकलन गरेर नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा डिएनए परीक्षण गरिएको थियो । तर डीएन्ए निगेटिभ आएको रिपोर्ट गरियो ।
आश्चर्यको कुरा त के छ भने निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’ नै नपठाइएको अवस्थामा के कुरालाई आधार मानेर डीएनए टेस्टको कुरा गरिएको छ ? यस्तो खाले नाटक र ढोंगमा सत्ता चलाउने र जनता ढाँट्नेहरुमाथि जनताले के विश्वास गर्ने ?